Enhydro quartz midika. Firavaka toy ny pendant na peratra amidy - horonan-tsary
Enhydro quartz midika sy fananana. Enhydro quartz amidy dia azo ampiasaina amin'ny firavaka ho toy ny pendant na peratra.
Miraraka anaty rano misitrika ao anaty kristaly izy io rehefa nihalehibe. Ny vato be vidy indrindra dia misy ireo miloko be dia be, izay misy lobaka ny rivotra ao anaty kristaly ary rano kely mihetsika ao anaty paosy. Ny fitrangan'ny siola hafa dia misy fantson-drano ao anatin'izy ireo izay mihetsiketsika ary tsy mihetsika.
Quartz an'ny solika
Araka ny hitanao amin'ny sary sy ny horonan-tsary dia kristaly ity herkimer diamond or petroleum quartz, avy any Afghanistan. Avy daholo ny rehetra fa ny sasany kosa dia amboarina quartz satria misy ranony hita sy incluisons gaz voafandrika ao anaty kristaly.
Enhydro quartz midika sy fananana metafisika
Ny rano ao anatin'ireto kristaly ireto dia voaro amin'ny loto avy amin'ny loto ataon'olombelona. Izany dia mahatonga azy io ho kristaly mety hampiasaina ho an'ireo mitady fahadiovana. Aoka izany fahadiovan'ny saina, vatana na fanahy. Ity rano ity dia ilay zanaky ny fiainana ara-bakiteny ary ahitana ny fahadiovan'ny drafitra masina tany am-boalohany. Ny iray dia mety hisaintsaina kristaly quartz an'isa miaraka amin'ny fifantohana amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ity vato ity dia manome rohy mazava sy mivantana amin'ny Akashic Records.
Ny fiasana amin'io vato io dia tena tsara amin'ny fanadiovana sy fanadiovana poizina avy amin'ny rafitra ara-batana iray manontolo. Ny fampiasana io kristaly io amin'ny endrika elixir dia manamora ny ambaratonga lalindalina kokoa amin'ny fanadiovana ny vatana sy ny fiasana ara-panahy miaraka amin'ny kristaly madio misy angovo mampitombo angovo.
Enhydro quartz avy ao Afganistan
Izahay mivarotra firavaka vita tamin'ny quartz ho an'i Enhydro dia toy ny pendant na peratra.